Ije Scandinavian - contraindications
Mma Ụlọ nkwakọba ahụ
Iji na-akwado onwe gị na ọdịdị dị mma, ị ga-abanye maka egwuregwu, nhọrọ kacha mma maka nke a na-agba ọsọ ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, ahụike , mana enwere ọnọdụ mgbe mmadụ na-enweghị ike imeli ya. Ịga n'ụlọ ntụrụndụ ma ọ bụ ụlọ nkwonkwo maka ọtụtụ ndị na-enweghị ike imeli, ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ahụike siri ike, ị nwekwara ike chefuo ịgba ọsọ. Na ihe isi ike ndị a, njem Scandinavian bụ nke a ma ama taa ga-enyere aka ịnagide, n'ihi na ụdị egwuregwu a, ọ bụ ezie na o nwere obere ihe-egosi, ma na ya niile, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla.
Gịnị bara uru maka ije ije Scandinavian?
Ije ije Scandinavian bụ njem na-ejegharị na-eji mkpịsịiche pụrụ iche, na-ejikarị ogwe okporo osisi ndị ọzọ eme ihe. Ụdị egwuregwu a, dị ka ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara, nwere ike imezi ahụike mmadụ ma chekwaa ha ka ha ghara ikwekwu ego. Uru nke Scandinavian na-eje ije na mkpisi bụ:
Mgbe ọ na-eje ije, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na uru nile malitere ịrụ ọrụ, mgbe ha nwesịrị nkwurịta okwu ụfọdụ, olu ha malitere ịmalite.
N'ihi ngwa ngwa nke ụbụrụ n'oge mmega ahụ, iku ume na-abanyekwu, akpa ume gị na-amalite ịmalite ịgbatị nke ọma karị, ma e wezụga omume a na-eme n'èzí, nke dịkwa oke uru maka ahu.
Mkpụrụ ọbara nke akụkụ ahụ dị iche iche dị mma karị, arụ ọrụ nke usoro obi a na-edozi anya, ya mere, ihe gbasara ihe gbasara omume nke ọrịa ọrịa na-abawanye.
Ọ bara ezigbo uru na ị na-eje ije n'ọdụ ụgbọ mmiri maka usoro ụjọ ahụ. A na-eweghachi ụra nke ọma, a na-eme ka akwara dị ike, enwee ịda mbà n'obi.
Na-ebelata ihe ize ndụ nke ịmepụta ọrịa ndị siri ike, dịka ọrịa shuga, ọrịa ara ara, ọrịa cancer.
Ọkwa shuga na-alaghachi azụ na nkịtị ma nrụgide ahụ kwụsiri ike.
A na-atụ aro ka ị na-ejiri mkpịsị aka na-agakwuru ndị nwere nsogbu na usoro ihe mgbu.
Na-egbochi mmepe osteoporosis.
Mee ka ọgụgụ isi na nguzozi dịkwuo mma.
Ịga ije na Scandinavian bụ ụzọ dị mma ị ga-esi gbasaa, n'ime otu awa nke omume ị nwere ike ọkụ ruo 500 kcal.
O doro anya na ọ na-emetụta ọkpụkpụ, gbanwee ọnọdụ .
A na - atụ aro ijegharị Scandinavian maka ụdị veinose. E kwuwerị, n'oge ọzụzụ dị otú ahụ, a na-ebipụ uru nke ụkwụ ya, ọ bụkwa maka ekele ndị a, ọbara dị na veins na-agba ọsọ n'obi, si otú ahụ na-ebelata nrụgide.
Scandinavian na-aga ije na osisi
N'agbanyeghị uru dị ukwuu site na ụdị egwuregwu a, ịga ije n'ọdụ ụgbọ mmiri nwere ọtụtụ nkwenye nke a ga - atụle ma ọ bụrụ na ị kpebie ịpụ maka ọzụzụ:
Ị gaghị enwe ike ịga ije na oge ezipụ.
A naghị atụ aro ya ka ị na-emega ahụ mgbe ị na-enwe nsogbu ọ bụla nke ọrịa na-adịghị ala ala.
Ọ bụghị ihe na-achọsi ike ịnagide ma ọ bụrụ na usoro ihe mgbu nwere nnukwu nsogbu. Ka ị ghara ime ka ọnọdụ gị ka njọ, ọ dị gị mkpa ịkpọtụrụ dọkịta.
Na mgbali elu ọbara, ọ ka mma ịghara ịga ije.
Ọ bụrụ na e nwere ọrịa ndị buru ibu, ijegharị Scandinavia nwere ike ime ya ma ọ bụrụ dọkịta.
Ọzọkwa, egwuregwu a nwere ike imerụ ahu ahụ ma ọ bụrụ na emehie ihe ndị a na usoro ntụgharị:
ahụ na-agbasi ike mgbe niile;
a na-agbanye azụ ahụ;
n'olu ka esetiri eseti;
a na-agbada isi, a na-eche ihu mgbe niile na ala;
a na-agbanye n'ahụ ahụ;
mmeghari oge na ụkwụ na aka;
mgbe ị na-eje ije na-agbada ike;
ike nke na-adịghị ike.
Akụkụ nke anụ ahụ maka ụmụ nwanyị
Protein: nsogbu ma ọ bụ uru?
Omume maka nwanyi di ime 3 trimester
Onye na-agba abụba
Ihe mgbagwoju anya maka mmechi nke ụkwụ ụkwụ
Soy Protein - Pros na Cons
Kedu ụdị ahụ na-arụ ọrụ mgbe ị na-adọta?
Yoga na-akwalite maka ịdị arọ
Ngwunye Protein Na Na
Ịgbagharị igwe kwụ otu ebe "Pokhudei"
Mmetụta maka ịdị arọ
Ụmụ nwanyị na - agwọ ọrịa - 66 foto nke ejiji ụdị oge niile
Kuki ndị na-adịte aka
Selena Gomez n'otu ntabi anya na ụlọ ahịa abụọ na-egbukepụ egbukepụ maka mbipụta blọọgụ
Pyelonephritis n'afọ ime
Sage - kụrụ ma lekọta
Ryan Gosling kwuru banyere ndụ ya na Eva Mendes mgbe nwa Amadie Lee mụrụ
Megan Fox mepụtara maka magazin a "oke"
Plum "Ebube Volga"
Egwuregwu na Audrey Hepburn
Ụgbọ njem ụmụaka n'ime ụgbọ ala
Kedu nhicha akwa nke dị mma ka mma?
Kedu esi eme ka akpụkpọ ahụ sie ike na afọ gị mgbe ị mụsịrị nwa?
Kedu ka esi gbanye bọtịnụ keyboard n'elu laptọọpụ Asus?
Chineke Neptune - Gini ka chi ndi ozo na-acho ma gini?
Mmiri nke Comfrey
Chashushuli si na beef